(Waxaa laga soo toosiyay Maryama)
Maryam bintu Cimraan (; ; loo qoro: Marīam, loogu dhawaaqo: "Mariyam"; hooyo u ah: ﻧﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ; "Nebi Ciise"; ama: يسوع, loogu dhawaaqo "yasuuca") waxay ahayd qof muuminad ah oo dhashay isla markaana hooyo u ahayd nebigii Alle u soo direy reer [Israaiil|[banii Israaiil]] waa Nebi Ciise (c.s). Markey taariikhdu ahayd qiyaastii 20 sano C.H (Dhalashaddii Ciise Horteed) ayaa Maryama ku dhalatey magaalada Baytulaxam ee ku taala dhulka ay Falastiiniyiintu degaan, waxay isla magaaladani ku dhimatey markey taariikhdu ahayd qiyaastii 100 ilaa 120 sano C.D. Maryama waa qofta dumar kali ah ee lagu xusay marar badan kitaabka Quraanka ah. Ilaahay (koreeye) wuxuu Quraanka kariimka ah ku yidhi:
Nebi Ciise (c.s) wuxuu ka mid yahay shanta Ras;uul ee Alle ku sheegay kitaabka Quraanka kariimka ee la siiyay Nebi Muxamed
, waxaa Ilaahay ku soo dejiyay kitaabka Injiil ee saldhiga iyo aasaaska u ah diinta Masiixiyada in kastoo ay wax badan ka bedeleen isla markaana ay magacyo badan iyo qeeybo badan ka dhigeen.
Guud ahaan, Nebi Ciise masiixi waa nebiga labaad ee ugu dambeeyay ama lagu soo khatimay dhamaan anbiyada Alle soo diray, waxaana ka dambeeyay oo kali ah Nebi Muxamed
↑ "kitaabka Quraanka kariimka ee la siiyay Nebi Muxamed
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maryam&oldid=169837"
Last edited on 8 Luuliyo 2017, at 07:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Luuliyo 2017, marka ee eheed 07:37.